Mandalina ny fifandraisan’ireo fiteny Afrikana sy ny zo nomerika ao amin’ny DRIF 2021 · Global Voices teny Malagasy
Mandalina ny fifandraisan'ireo fiteny Afrikana sy ny zo nomerika ao amin'ny DRIF 2021
Atao ny Alatsinainy 12 Aprily amin'ny 2ora15mn UTC ny famelabelaran-kevitra.
Voadika ny 16 Avrily 2021 3:20 GMT
Handray anjara amin'ny Sehatra Digital Rights & Inclusion (Zo Nomerika sy Fampidirana) ny Rising Voices ny Alatsinainy 12 Aprily amin'ny alàlan'ny fikarakarana famelabelaran-kevitra mba hiresahana ny filàna ny fandinihana ny fomba tokony hisian'ny tetipanoron'ny zo nomerika momba ny fiantraikan'ny fiteny Afrikana ao amin'ny kaontinanta.
Araka ny Fanambarana Afrikana momba ny Zon'ny Aterineto sy ny Fahalalahana:
Manan-jo hampiasa ny fiteniny manokana na ny fiteny hafa nosafidiany hamoronana, hizarana ary hanaparitahana vaovao sy fahalalana amin'ny aterineto ny olona sy ny vondrom-piarahamonina.
Ho an'ireo vondrom-piarahamonina miteny Afrikana vitsy an'isa, indizeny, na tsy dia manana loharanon-drakitra firy, ny fampiasana sy ny fiarovana an'ity zo nomerika ity dia manana ny fanambiny manokana, ka iray amin'izany ny fametrahana ny lohahevitra ao amin'ny teti-panorona amin'ireo sehatra ifanakalozana momba ny zo nomerika isankarazany. Ilaina ny fampiatiana bebe kokoa ireo fitenin'ny vondrom-piarahamonina izay miasa hizorana amin'ny fahamaroan'ny fiteny kokoa amin'ny aterineto.
Hiresahana fanontaniana momba ny fanamby ho an'ny vitsy an'isa, indizeny, sy ireo vondrom-piarahamonina miteny afrikana tsy dia ampy fitaovana amin'ny famoronana na fidirana amin'ny votoaty nomerika amin'ny fitenindrazan'izy ireo ity famelabelaran-kevitra ity. Henointsika ny zava-niainan'ireo mpikatroka nomerika fiteny Afrikana miisa efatra amin'ny fiteny Igbo, Swahili, Twi, ary Yorùbá izay mampiasa ny fomba “Do-It-Yourself” (ianao ihany no manao azy) hiantohana fa misy amin'ny aterineto ny fitenin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famoronana ny votoaty nomerika, amin'ny fanampiana ny fananganana fitaovana, sy ny fampiofanana sy ny fampianarana ireo mpampiasa ny fiteny hafa amin'ny fiteniny mba handray anjara amin'ny aterineto.
Handray anjara amin'ny famelabelaran-kevitra an-tsehatra ny mpikatroka nomerika fiteny Afrikana miisa efatra ao anatin'ny fanentanan'ny tambajotra sosialy 2019 @DigiAfricanLang. Hizara ny fomba fijerin'izy ireo momba ny filàna aterineto manana kolontsaina sy fiteny samihafa i Zita Ursula Zage, Tochi Precious Friday, Bonface Witaba, ary Adéṣínà Ayẹni (Ọmọ Yoòbá). Eddie Avila, talen'ny Rising Voices no handrindra ny famelabelaran-kevitra.
17 ora izayAfrika Mainty